FENOARIVO-ATSINANANA : Namonjy fahoriana dia hita faty efa mihintsa-nofo koa izy mirahalahy
Ny fofona ratsy ren’ireo mpandalo sy ny mponina no nahitana ny razana mpirahalahy tany Fenoarivo atsinanana. 10 octobre 2019
Efa karana sisa sy ireo lamba teny an-koditr’izy ireo no hita niaraka tamin’ny fatin’ireo mpirahalahy tany Fenoarivo atsinanana, ny 8 oktobra lasa teo . Ny alatsinainy 9 septambra no tonga tao Ampasimpotsy Kaominina Ambatoharanana distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana i Tombo Raphaël sy Roland.
Izy roa lahy ireo izay mpirahalahy mpiray tampo. Avy ao Vohilakatra Fokontany Ambalabe Kaominina Mahanoro distrikan’i Fenoarivo-Atsinanana izy ireo. Monina ao Vohilakatra io Rolland raha ao Ampasimbe-Manantsatrana kosa i Tombo Raphaël. Fantatra fa nandeha namonjy fahoriana no dian’izy mirahalahy tao Ambatoharanana io. Nisy rahalahin’izy ireo nodimandry. Ny marainan’ny talata 10 septambra no niala tao amin’ilay tanàna Ampasimpotsy izy roa lahy handeha hamonjy fodiana amin’ny tany niaviany avy. Ny marainan’ny talata io no farany nahitana azy ireo.
Nisy ny antso sy fampandrenesana natao tamin’ny haino aman-jery sy tambazotra sosialy nanaovana ny fikarohana azy ireo. Ny talata 8 oktobra, nahatsirakitra ireo mpandalo amin’ny lalana mihazo an’i Morondrano raha avy ao Fenoarivo-Atsinanana fa misy fofona ratsy be manodidina ny fasan-dry Mompera eo amin’ilay toerana antsoina hoe Saint-Benoit. Nisy ireo tsy naharitra fa niezaka namantatra ny anton’ilay fofona ratsy. Nahitana karandohan’olona sy taolana efa tsy nisy nofo tao anaty kirihitr’ahitra tsy lavitra teo. Mbola nahitana lamba maromaro ihany koa. Naheno io vaovao io ny havan’i Raphaël sy Roland dia tonga nanamarina ny momba ireo razana ireo hita ireo. Akory ny hatairan’izy ireo fa tena izy roa lahy tokoa ireo hita ireo. Nanamanarina ny fizahana nataon’ny fianakaviana ny mbola nahitana ny lamba nataon’izy ireo farany niala tao Ampasimpotsy hita teo akaikin’ny taolana.
Tonga teny an-toerana nanao ny fizahana ny razana ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo. Mandeha ny famotorana momba ity raharaha ity fahafatesana mpirahalahy ity . Ireo rehetra tonga teny amin’ilay toerana nahitana ny razana, dia samy nahatsikaritra fa nisy diana fiara teo amin’ny faritra nahitana ireo taolana. Raha ny tombana, dia maty nisy namono ireto mpirahalahy ireto ny fanadihadian’ny manampahefana anefa no hahitana ny tena marina anton’ny fahafatesana. Niteraka horohoro ho an’ny mponina any Fenoarivo-Atsinanana izao tranga izao.